Kismaayo News » Shir loga hadlayo Maamulka Jubbaland oo ka dhacay Ceelwaaq iyo Saxiixeyaal ka qayb galay‏
Shir loga hadlayo Maamulka Jubbaland oo ka dhacay Ceelwaaq iyo Saxiixeyaal ka qayb galay‏
Kn:Magaalada Ceelwaaq ee gobolka gedo waxaa ka dhacay Shir balaraan oo ay ka soo qayb galeen siyaasiyiin saraakiil Ciidan iyo Aqonyahano iyo waxgarad kale.
Wafdigaaan Marki ay soo gareen Duleedka Magaalada Ceelwaaq ayaa waxaa halkaasi ugu hortay Masuliyiiin iyo Waxgarad ay ka mid ahaayeen Gudomiyaha Gobolka Gedo Ibrahiim Sh Ismaciil Fareey ,Hogaanka Ciidamada Jooga Aga Ceelwaaq Col. Cabaas Ibrahim Gureey ,Gudomiyaha Dagmada Ceelwaaq iyo Ku xigeenkiisa , Col Warfaa Sh. Adaan oo ah Afhayeenka Ciidamada, iyo waxgarad kale.
Ugu horeeyn Shirka waxaa lagu furay Ayadaha Quraanka ka dib waxaa Microphoonka lagu warejiyay Col Colujoog oo ka mid ahaa Wafdiga Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo waxana uu ka warbixiyay Ujeedka socdaalkooda intaasi ka dib waxaa hadalka qaatay Bile Qabowsade oo ka mid ah Gudiga Farsamada Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo asagana waxaa uu ka warbixiyay halka ay marayso howshi Maamul usameynta Jubboyinka iyo Gedo oo uu shegay in ay marayso heer gabo gabo.
Dhanka Masuuliyiinti ku sugnaa Dagmada Ceelwaaq waxaa u hadlay Gudomiyaha Gobolka Gedo Ibrahiin Fareey iyo Col. Cabaas Ibrahiim Gureey Gudomiyha Dagmada Ceelwaaq iyo Masuliyiin kala waxaayna dhamantood cadeyeen in ay Diyaar u yihiin ka qayb qadashada Maamul ay yeeshaan Gobolada Jubboyinka iyo Gedo waxaay sido kale balan qadeen in ay qayb libaax ka qadan doonan wacyi galinta Shacabka ku nool Gobolka Gedo sidi ay iskugu diyaarin lahayeen ka qayb qadashada Maamulka Jubbaland State.
Sh Maxamed Daa,uud ayaa waxaa uu sido kale sheegay in Usbuc Gudahood ay kula wareegi doonan Magaaloyinka Baardheere iyo Buurdhuubo ee gobolka gedo madaama Ciidamada Ahlusunna iyo kuwa Dowlada hada lo dhameeyay Sanadi ay ku howlgali lahayeen.